PRADEEP BASHYAL: दोस्रो जन्मदिनमा प्रसिद्धिलाई चिठी
दोस्रो जन्मदिनमा प्रसिद्धिलाई चिठी
ह्यापी बर्थ डे । आज तिमी २ बर्षकी भयौ । तिम्रा लागि (र, हाम्रो लागि पनि) जसरी पहिलो बर्ष निकै रोचक भए, दोस्रो बर्ष उत्तिकै रोमाञ्चक पनि । केही हप्ता अघिमात्र तिम्रो बुवाममीसाथ हामी मनकामना, सौराहाहुँदै बुटवलसम्म सँगै घुमेर फर्केका थियौं । तिमी यसरी हिंड्न र बोल्न जानेपछि तिमीसँग गरेको त्यो मेरो पहिलो लामो भ्रमण थियो । त्यो मेरा लागि कम्ता रमाइलो भएन । हामी सँगै हात्ति चढ्यौं, डुङ्गामा सयर गर्दै राप्ती नदिमा गोहीहरु गन्यौं । ति ठाउँहरु त म पहिले पनि घुमिसकेकै हुन् तर तिमीसँगको यात्राले पुरानै र सामान्य ठाउँ भए पनि यात्रा निकै अविश्मरणिय बन्न पुगे ।
दोस्रो बर्षमा तिमी यसपटक स्कुल पनि गयौ । थाहा छ प्रसिद्धि, तिमी भर्ना भएको पहिलो स्कुल देशकै ठूलो अफिस सिंहदरवारभित्र थियो । तर जाडो याम शुरु भएपछि चिसोले भेट्ला भनेर पछि तिम्लाई घरमै राखियो । तिमी ममी–पापासँगै जाडोयाममा सिरक ओडेर पढ्न खोज्थ्यौ । तिम्रो लागि भनेर पापाले एउटा छुट्टै कपी–कलम छुट्याइदिनु भएको छ जसमा तिमी आफ्नै पाराले लेख्न थाल्यौ । हुन त तिमी अझै अक्षर लेख्न सक्ने त भएकी छैनौं तर तिम्ले त्यतिधेरै उत्साह र लगनशीलता देखाएर कोर्ने सिधा–बाड्गे धर्काहरु मलाई कुनै ठूलै चित्रकारले बनाएको विश्वप्रसिद्धि चित्रझैं लाग्थे ।
त्यसै त औधी राम्री तिमी, अहिले हिंड्न र बोल्न सक्ने भएपछि तिम्रो सुन्दरता झन् बढि खुलेको छ । हिंड्न सक्ने भएकै कारण आजकल म तिम्रो घरमा आउँदा झ्यालको पर्दा, सिरक भित्र र ढोकाको कुनामा लुकेर ‘चोर पत्ता लगाउ’ खेल्न सम्भव भइसकेको छ । तिमीमा आफ्नो र अरु छुट्याउने विचित्रको शक्ति छ । तिमीले मलाई मात्र ‘मामाजी’ भनेर सम्बोधन गर्छौ भने तिम्लाई भान्जी भने अरुलाई ‘मामा’ मात्र । तिम्ले अहिले पापा, ममी, सानोपापा, सानोमामु, मेरो र भाईबहिनीहरुको पूरा नाम जानीसकेकी छ्यौं । पापा र ममीको मोवाइल नम्बर तिमी सिक्न खोज्दै छ्यौ, सायद अबको एक–दुई महिनाभित्रै जान्नेछ्यौ । तिमीलाई अहिले पापाको अफिसको नाम र पद सजिलै भन्न आउँछ । ‘ताराबाजी लैलै’, ‘इक्कल–दुक्कल तिक्कल चार’, ‘जोनी जोनी एस पापा’, ‘चि..मुसी..ची’ जस्ता थुप्रै गीत गाउन जानिसकेकी छौ । अझ तिम्लाई अलिअलि हिन्दी र नेपाली फिल्मका गीत पनि आउन थालिसकेको छ । ‘ओलाला ओलाला’, ‘सिम्पल सिम्पल’ तिम्लाई राम्ररी गाउन आउने गीतहरु हुन् । पछिल्लो तीजमा तिमी हामीसँग यती राम्ररी नाच्यौ, हामी सबै छक्कै पर्नेगरी । तिम्रो फोटो त यसपटक पत्रिकामा पनि छाप्पिसक्यो । नागरिक दैनिकले तिम्लाई जन्मदिनको शुभकामना भनेर लेख्यो । तिमी चौधरी ग्रुप, सानेपा पुगेर उसले दिने उपहार एक कार्टुन वाईवाई पनि लिग्यौ ।
मैले तिम्लाई अघिल्लै बर्ष लेखेको चिठीमै भनिसकेको छु कि तिमी साधारण मान्छे होइनौ । कारण, तिमीमा सानैदेखि विचित्रका गुणहरु देखिएका थिए । तिम्रा दाँतहरु छिट्टै आए, अरुभन्दा छिट्टै तिमी हिंडडुल गर्न र बोल्न सक्ने भयौ । तिमीमा कसैले खाने कुरा लैदिंदा समेत बाँडेर खाने बानी परिसकेको छ, फोहोरहरु डस्टविनमा लगेर मात्र फ्यांक्छ्यौ, तिमी डाइनिङमा बस्दा समेत ममीलाई सहयोग पु¥याउँ भन्दै दाल/तरकारी हाम्रो थालमा राख्दिन खोज्छ्यौ (भलै त्यसक्रममा धेरै बाहिर पोखिन्छ) । तिम्रो उमेरमा यस्ता गुण कमैमा देखिन्छ । गौतम बुद्धमा समेत सानैमा थुप्रै यस्ता गुणहरु देखिएका थिए रे, तिमीमा जस्तै ।
तिमी जन्मेपछि देशमा अहिले ४ वटा प्रधानमन्त्री फेरिइसके । देशमा नयाँ संविधान बनाउने भनेर बसेकाहरु काम भन्दा कुरा बढि गरिराखेका छन् । तिमी जन्मेको देश यस्तो हो जहाँ सत्ता र शक्तिमा धेरैजसो ‘चोर–फटाहा’ मात्र छन् जसले देशलाई खत्तम पारिराखेका छन् । कारण, उनीहरु अज्ञानी छन् । एकदिन मर्नुपर्छ भन्ने कसैले सोच्दैनन् । उनीहरुले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै निकै सानो छ । तर तिमी ठूलो भएपछि उनीहरुजस्तो हुनेछैनौं । यति ठूलो ब्रहमाण्डका एउटा पात्र हामीले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत निकै ठूलो हुनुपर्छ ।
सायद, यो बर्षदेखि तिमी स्कुल जानेछ्यौ जुन तिम्रो दोस्रो घर बन्नेछ । मेरो ईश्वरसँग प्रार्थना छ, तिम्रो स्कुल जीवन रमाइलो होस जहाँ तिमी बोझले होइन रहरले जानेछ्यौ ।
जन्मदिनको पूनः एकपटक शुभकामना
Labels: Prasiddhi Bhusal
Unknown March 5, 2012 at 12:50 AM
really you areafantastic child all around the world. Be always happy and give us sweet smile. keep it up and do great work. God bless you sweet girl and the beauty queen, Bhanji ji.
and Happy Birthday to you>>>>>>> .